Ny Wobenzym, izay matetika no soratana amin'ny vehivavy bevohoka, dia manondro antokom-pihetseham-po maro izay misy fiantraikany be dia be. Io fanafody io dia manana fiantraikany antiviral sy antimikrobia fanta-daza, saingy azo ampiasaina koa ho toy ny immunodilator. Ankoatr'izay, noho ny fahafahana mampihena ny lozabe, matetika ny fanafody dia omena ny vehivavy bevohoka indrindra, indrindra amin'ny teny manaraka.
Inona matetika no ampiasain'i Wobenzim amin'ny fitondrana vohoka?
Ao am-pon'io zava-mahadomelina io dia singa malemy avy amin'ny zavamaniry sy ny biby. Izany no mahatonga ny Wobenzym ho azo lazaina fa mahazatra ny zava-mahadomelina misy fiantraikany ratsy. Misaotra ny zava-misy toy izany, ny presbytera dia omena ny vehivavy bevohoka.
Raha miresaka manokana momba ny antony i Wobenzym dia omena ny vehivavy bevohoka, dia amin'ny voalohany, io no lanjan'ny fiarovan'ny vatana. Fantatry ny rehetra fa tsy azo ekena ny fampiasana fanafody antibiotika sy antibiotika amin'ny ambaratonga voalohany. Vobenzim izao no tonga amin'ny famonjena, izay tsy vitan'ny manatsara ny rafitra fiarovana ao amin'ny vatana, fa afaka miady amin'ny aretina virosy sy aretina hafa ihany koa amin'ny dingana voalohany.
Ankoatra izany, mandritra ny fitondrana vohoka, indrindra eo amin'ny dingana voalohany, i Wobenzym dia azo faritana amin'ny:
fanitsakitsahana ny rafi-panafody;
gestosis (hiady amin'ny fampisehoana voalohany);
Azo alaina amin'ny vehivavy rehetra bevohoka ve ny Wobenzyme?
Maro ny reny miandry no liana amin'ny fanontaniana raha azo atao ny mitondra Wobenzym mandritra ny fitondrana vohoka, raha ny fampiharana ny fampiasana azy dia mampiseho fa tokony ampiasaina amim-pahamalinana ny fampiasana zava-mahadomelina mandritra ny fitondrana ny zaza. Ny zavatra dia hoe mila fitsaboana ara-pahasalamana ny fitsaboana, indrindra mandritra ny androm-pandrasana ny zaza. Tsy misy na inona na inona azo atao amin'ny vehivavy bevohoka tsy afaka, na dia misy aza ny fampiasana azy, dia misy ireo soritr'aretina manelingelina ny vehivavy.
Ahoana no haka Wobenzim mandritra ny fitondrana vohoka?
Ny fanendrena rehetra ataon'ny dokotera dia mitarika ny tsirairay, manamarina ny henjana sy ny karazan'aretina, ary koa ny dingana. Izany no antony ilàna foana ny manaraka ny torolàlana sy ny toro-hevitra omen'ny dokotera manoratra ity fanafody ity.
Ny tena mahazatra indrindra amin'ity tranga ity dia ny rafitra, izay misy takelaka 3 misy fanafody 3 isan'andro, eo amin'ny antsasak'adiny alohan'ny sakafo. Ny fitsaboana amin'ny fampiasana fanafody dia tokony asehon'ny dokotera. Tokony hosasana amin'ny tabilao lehibe ny fanafody.
Fihetseham-panafody ho an'ny Wobenzima mandritra ny fitondrana vohoka?
Ankoatra ny tsy fandeferana amin'ny singa tsirairay ao amin'ny zava-mahadomelina, i Wobenzym dia voarara amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona sy fametavetana amin'ny vehivavy miaraka amin'ny trombophilia (fampihenana ny rafitra raitra). Noho izany, mialoha ny fanendrena an'io fanafody io, ny dokotera dia mahita ny vehivavy bevohoka: manana fanitsakitsahana toy izany ve izy.
Miaraka amin'ny hematoma izay mitranga mandritra ny fitondrana vohoka, dia mifanohitra ihany koa ny zava-mahadomelina Wobenzym.
Noho izany dia tokony lazaina fa ny fanafody Wobenzym, noho ny firafitra miavaka, dia azo ampiasaina amin'ny karazana aretina isan-karazany ao amin'ny vehivavy bevohoka. Na izany aza, aza adino fa amin'ny lafiny rehetra, ny fandraisana azy dia tokony hifanaraka amin'ny dokotera, izay matetika dia manondro ny faharetan'ny fidirana sy ny fampidirana ny zava-mahadomelina. Raha tsy izany, ny vehivavy bevohoka dia mety hanimba ny fahasalamany ihany, fa koa ny zanany ho avy.
Herintaona 12-13 herinandro
Fanadihadiana ny hCG - dikanteny
Fetal mihamahazo - soritr'aretina
Toxicose any aoriana
Efitrano ho an'ny vehivavy bevohoka
Ny herisetra mandritra ny herinandro 28 - inona no mitranga?
Prolactine sy ny bevohoka
Fiarovana amin'ny foetus antèna
Fampivelarana zokiolona ho an'ny rantsantanana 1
Ny masirasolon'ny menaka dia tsara sy ratsy
Kiraro ortopedika ho an'ny ankizy manana hadalana valgus
Ahoana ny fomba fandefasana ny wallpapers?
Ny Mediterranean style ao anatiny
Maingan-tsakafo manondraka akoho ao anaty lafaoro?
Ny tombony amin'ny sôkôla
Vola ho an'ny rivotra: tetikasa 8 izay tsy nahitana hery ireo mpamokatra
Ny taolam-paty amin'ny teny sinoa - sakafo matsiro mahatsikaiky mahatsikaiky avy any Azia
Ny vadiny dia tsy tia ny vadiny - ireo famantarana
Sary fanangonam-bolan'ny Summer Guerlain 2015
Condylomata amin'ny vehivavy - fitsaboana
Lindsay Lohan sy ny rahavaviny kambana